गोरखा साम्राज्यसम्बन्धी प्रथम-राष्ट्रका दृष्टिकोणबारे बहस हुने ! – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
पुस २४, २०७५ १४:४२ मा प्रकाशित
२४ पौष , काठमाडौं । गोरखा साम्राज्यलाई नेपालका प्रथम-राष्ट्रहरूले कसरी बुझ्दै आएका छन् भन्ने सम्बन्धमा बहस हुने भएको छ । उक्त कार्यक्रमको आयोजकमा ताम्सालिङ नागरिक समाज साथै संयोजकमा एस.सि.आर.सि. रहेको छ । कार्यक्रम यही पुस २६ गते नेपाल तामाङ घेदुङ सङ्घीय कार्यालय चुच्चेपाटी (हायत्गेटअगाडि)को सभाहलमा हुनेछ । कार्यक्रको चोहो (अध्यक्ष) डा. मुक्तसिंह तामाङ (मानवशास्त्री) तथा गन्बामा डा. गणेश योञ्जन (जापानका लागि नेपाली पूर्वराजदूत) रहनुहुनेछ । वक्ताहरूमा बुद्धछिरिङ मोक्तान (राजनैतिक विश्लेषक), विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ (मार्क्सवादी चिन्तक/विश्लेषक) साथै मोहन गोले (अध्यक्ष- नेपाल तामाङ घेदुङ) रहनुहुने जनाएको छ
हरेक वर्ष पुस २७ गतेलाई एकता दिवसको रूपमा मान्दै आएको देखिन्छ । त्यसको शुरूवात राजा महेन्द्रले गरेका थिए । सन् २००६ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनले भने एकता दिवसलाई मान्यता दिएन । त्यसैले पुस २७ गतेलाई एकता दिवसको नाममा राज्यले दिँदै आएको सार्वजनिक बिदासमेत कटौती गर्यो । यद्यपि, हिन्दूराज्यसत्ताको पक्षपातीहरूले भने सो दिनलाई एकता दिवसको रूपमा मान्न छाडेका छैनन् । राज्यसत्ताले पनि पुनः सन् २०१७ देखि एकीकरण दिवसको मान्दै आएको देखिन्छ ।
एकता दिवसको पक्षधरका अनुसार पृथ्वीनारायण शाह नेपाल राष्ट्रको निर्माता हुन् । यहाँका बाइसे र चौबीसे लगायतका अनगिन्ती साना भूरेटाकुरे राज्यहरूलाई उनैले एकीकृत गर्दै आधुनिक नेपालको निर्माण गरेका थिए । सोही आधारमा पृथ्वीनारायण शाहलाई बडामहाराजाधिराज भन्ने गरेका छन् । उनैको जन्मजयन्तीको अवसरलाई नै एकता दिवसको रूपमा मान्दै र मान्न दबाब दिँदै आएका पनि छन् ।
यहाँका प्रथम-राष्ट्रहरूले भने एकता दिवसलाई नै कथित दिवसको रूपमा बुझ्दै आएका छन् । पृथ्वीनारायण शाहले एकता गरेका थिएनन् । उनले भौगोलिक रूपमा गोरखा साम्राज्यको विस्तार मात्रै गरेका थिए । भावनात्मक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा कहिल्यै एकता वा एकीकरण भएकै छैन । यहाँ एकल हिन्दूराज्यसत्ताले जबरजस्त एकता दिवसको नाममा हिन्दूत्त्व लाद्दै आएको छ । यो देश निर्माणको क्रममा यहाँका प्रथम-राष्ट्रहरूमाथि अक्षम्य युद्धअपराध तथा ज्यादति गरेका थिए । उनीहरूका अनुसार पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माता थिएनन् । तिनले राष्ट्र (प्रथम-राष्ट्र/आदिवासी/मूलबासी)लाई सखाप पारेका थिए । यसप्रकार राष्ट्र भनेको देश होइन । राष्ट्र त तामाङ, गुरुङ, मगर, थारु, नेवार, रार्इ र लिम्बु आदि हुन् ।
यही तथ्यको अपव्याख्या गर्दै असली राष्ट्रलाई जातिको रूपमा बुझ्नेको कमि छैन । यहाँ प्रथम-राष्ट्रहरूले आफ्नो अधिकारको लागि आवाज उठाउँदा जातिवादी तथा अराष्ट्रियताको झूटो आरोप लगाउने क्रम रोकिएको छैन । कथित नेपाली राज्यसत्ताले राज्यराष्ट्रको अवधारणालाई अघि सार्दै यहाँका असली राष्ट्रहरूमाथि घोर अमानवीय व्यवहार गर्दै आएको छ । यो आरोप मात्रै नभएर ऐतिहासिक रूपमा पनि प्रमाणित भएको इतिहासविद्हरू दाबी गर्दछन् । पृथ्वीनारायण शाहले प्रथम-राष्ट्रका पुर्खाका शीर गिँढ्दै; नारीहरूमाथि चरम् यौन शोषण समेत गरेको थियो । जीउ, धन र भूमि समेत खोसेर विभेदपूर्ण खाडलमा पुरेको थियो ।
पृथ्वीनारायण शाहले युद्ध जितेपछि पहिले हारेको दिनलाई सम्झँदै प्रथम-राष्ट्रका नाक-कान काट्ने र छाला तार्ने जस्ता युद्ध अपराध समेत गरेका थिए । त्यसैले पनि आफूहरूलाई यहाँका आदिवासी वा मूलबासी भएको दाबी गर्दै आएका प्रथम-राष्ट्रहरूले भने पृथ्वीनारायण शाहलाई एकीकरणकर्ता वा राष्ट्र निर्माताको सट्टा युद्ध अपराधीको रुपमा चिन्दै आएका छन् । यसपालिको पुस २७ नजिकिइसकेको छ । केही व्यक्ति तथा पार्टीले एकता दिवसको नाममा सार्वजनिक बिदा मागिरहेका छन् । तथापि, प्रथम-राष्ट्रहरूका अनुसार, यो दिवसले आफूहरूमाथि बिगतमा गरेका अमानवीय व्यवहारको झल्को दिँदै विद्रोहको लागि आह्वान गरिरहेको छ ।
अहिलेको विश्वजगत्लाई हेर्ने हो भने प्रथम-राष्ट्रहरू पहिचानको मुद्दामा लामबद्ध हुँदैछन् । यस्तो परिवेशबीच कथित एकता दिवसमाथि यहाँका प्रथम राष्ट्रहरूले आफ्नो अभिमत राख्न पाउने भएका छन् । यसकालागि ताम्सालिङ नागरिक समाजले ”गोरखा साम्राज्य : नेपालका प्रथम-राष्ट्रहरूको दृष्टि” शीर्षक जुराएको छ । यसक्रममा गोरखा साम्राज्यप्रति प्रथम-राष्ट्रका बुझाई, इतिहास लेखनमा भएका गल्तीलाई सच्याउँदै कसरी आपसी सद्भावना स्थापना गर्न सकिएला ? यहाँ बहुल राष्ट्रिय एकता कसरी निर्माण गर्न सकिएला भन्ने सम्बन्धमा सेमिनार शैलीको बहस गर्ने भएको छ । यसप्रकार ऐतिहासिक कार्यक्रम हुने भएकोले सहभागिताकालागि आयोजक ताम्सालिङ नागरिक समाजले आह्वान गरेको छ । कार्यक्रमलाई वार्षिक रूपमा निरन्तरता दिँदै जाने संयोजक संस्था एस.सि.आर.सि.ले जनाएको छ ।